Kedu ihe bụ ebili mmiri kachasị njọ na Spain? | Network Meteorology
Kedu ihe bụ ebili mmiri kachasị njọ na Spain?
Sergio Gallego | | Ebili mmiri ọkụ
Ugbu a mba ahụ dum na-enwe ihu igwe okpomọkụ izizi nke afọ ma nwee okpomọkụ karịrị ogo 40, Ọ bụ oge dị mma icheta ihe kacha bụrụ ihe ọkụkụ kacha njọ nke mba a enwetara na ndekọ.
Ọ dị ịtụnanya, ihe kacha njọ ruo taa bụ afọ gara aga, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla na-erughị ụbọchị 26. N'oge ndị ahụ, Mercury jisiri ike gafee ogo 40 n'ọtụtụ ebe na Spain karịsịa na etiti na n’ebe ndịda nke peninshula.
Okpomọkụ a malitere na June 27, 2015 wee kwụsị na July 22 nke otu afọ ahụ. N'ime oge ahụ, ụbọchị kachasị ekpo ọkụ bụ ụbọchị 6 nke ọnwa Julaị nke enwere ọnọdụ okpomọkụ dị 37 Celsius. N'ime ụbọchị iri na ise nke ọnwa Julaị, enwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ógbè ndị metụtara ụdị ebili mmiri a, na-eru 15. Ọ bụ enweghị mgbagha ọ bụla oke oke ọkụ ebe ọ bụ na emere ndekọ gara aga na 30 yana ụbọchị iri nke ogologo oge
Ọdịdị ọkụ a ma ama nke afọ gara aga pụtara na ọtụtụ mpaghara mpaghara Spanish, nwere ezigbo oyi na-egbu ọtụtụ ụbọchị n'usoro. Eziokwu a nwere ike ịbụ n'ihi mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa nke ụwa niile na-enweta. Agbanyeghị, enwere mpaghara Spain ebe enwere mmetụta okpomọkụ n'akụkụ, dịka ọ dị na Galicia, Asturias na mba Basque.
Anyị ga-echere ruo oge ezumike ọzọ iji mara ma enwere mmiri ọkụ ndị ọzọ na ogologo oge ha ga-adị. Dị ka ndị ọkachamara gbasara ihu igwe si kwuo, ọnọdụ okpomọkụ nke Spain niile na-ahụ bụ oge nkịtị n'oge ọkọchị, ya mere ị ga-eji ndidi kee onwe gị ma weta okpomọkụ na ụzọ kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Kedu ihe bụ ebili mmiri kachasị njọ na Spain?
Kedu ka esi esi kee mmiri mmiri?